Ezigbo Pirate Bay - Budata egwu, ihe nkiri, n'efu!
Zọ kachasị mma iji kwalite ahụmịhe gị na Pirate Bay [Emelitere Eprel 2019]
Oge nwere ike ịdị adị, mana ọ dịkwa oke mma. Odi otutu ubochi anyi ji ebi na uwa a. Ichere na mmiri iyi apughi ibu otu anyi si eji oge a.
Pirate Bay nwere aha oma inye onyinye ngwa-ngwa nke ịrụ ọrụ nke ọma. Aha a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-enye aka n'ịgha mkpụrụ na ị na-ebugote usoro mgbe niile, na-enyere aka ịmepụta obodo nke ndị ọrụ nwere ụdị echiche ahụ na-akwado ibe ha.
You nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ gbasara Pirate Bay ebe a ma ọ bụrụ na ịmabeghị usoro ikpo okwu ahụ: https://www.thepiratebay.wiki.
Mgbe i nwere osote mmiri, o nwere ike ịbụ n'ihi enweghị ndị ọrụ mkpuru ma ọ bụ ọdịnaya enweghị ogbenye. Maka nkezi onye ọrụ, okwu a abụghị na Pirate Bay. Ọ bụ na ntọlite ​​ha nwere n'ụlọ.
Zọ kachasị mfe iji bulite ụdị nbudata nbudata gị
Ọ dị mkpa icheta na nbudata na nbudata ọsọ ọsọ nke ISP gị na-ehota gị n'oge oge ahịa ha na-egosipụta oke ị nwere ike nweta. Ọtụtụ mpaghara adịghị abịaru nso ọnụego ekwupute ndị a. Dịka iwu izugbe mkpịsị aka ukwu, ọ dị mma ịtụ iwu maka ọsọ ọsọ 50% karịa nke ị chere na ọ dị mkpa iji hụ na ị nwere ike ịnweta ahụmịhe kachasị mma.
Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị chee na 50 Mbps ga-ezuru oke iji gboo mkpa ọsọ ịntanetị gị, mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ maka 75 Mbps kama.
Ọ dịkwa mkpa icheta na MBps na Mbps bụ atụmatụ iche iche. Ọ bụrụ na ịnwere 1.44 MBps, nke ahụ bụ ihe ruru ihe dịka 11.5 Mbps. Itkụnye “B” pụtara na ị na-agbanwe site na megabits gaa megabytes kwa sekọnd.
Ozugbo i buliri ọsọ gị, mgbe a lee ụzọ ndị ọzọ iji meziwanye ahụmịhe gị na The Pirate Bay.
1. Lelee igwefoto na modem gị
Ọ bụrụ na ị na-enwe njikọ Internetntanetị dị ala, mgbe ahụ, ọ ga-ata ụta maka modem gị. Gịnị bụ ihe mbụ ị na-eme ma ọ bụrụ na i zute nkwụsị data? Reset tọgharịa modem. Ọ bụrụ na nke ahụ arụghị ọrụ, ị nwere ịkwụpụ rawụta ahụ, wee kụọ ya ọzọ. May nwere ike ịkwalite ngwa ọrụ ndị a ma ọ bụrụ na ị na-enwe njikọ ugboro ugboro mgbe ị na-egwu.
2. Nyochaa usoro gị
Know mara mgbe oge ikpeazu bụ na i nyochachara maka nje na sistemụ? Malware, trojans, na ihe ndị ọzọ a na-achọghị nwere ike ịbelata akụrụngwa kọmputa gị. Mgbe nke ahụ mere, ọsọ gị na-ata ahụhụ n'ihi ya. Ọ nwere ike ịba uru ịme nyocha kwa ụbọchị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ebudata iyi oge niile.
3. Belata ndabichi na sistemụ gị.
Enwere ngwaahịa akpọrọ Webroot nke na-arụ ọrụ na Mac®. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ọ na-ebute ndabichi na sistemụ ka ị ghara inwe ike iji ọrụ nkwupụta. Must ga-emechi sọftụwia ahụ wee kwe ka mpio a na-eme ka olu daa wee daa. Enwere otutu mmemme na ikpo okwu nke nwere ike ibute ndabichi na usoro nbudata ma ọ bụ ọsọ Internetntanetị.
4. still ka na-agba nyo?
Ọ bụrụ na ị nọ na njikọ DSL kama ịgbasa Bọndrị maka ịntanetị gị, yabụ ogo nke nzacha gị nwere ike ịbụ nsogbu. Ihe ọghọm ndị na-eme n'ahịrị nwere ike ibute ọdịda na mberede, na-amanye gị ịmaliteghachi. Nsogbu ọzọ n'ọnọdụ a akọwapụtara nke ọma bụ ọnụnọ nke ekwentị ikuku. Gbalịa ka ịnwale ule iche iji hụ ma otu ngalaba na-ekepụta nsogbu ị na-enwe na The Pirate Bay.
# 5. Block nwere mgbochi ISP na saịtị ahụ.
ISfọdụ ISP ga-egbochi ikpo okwu zuru oke mgbe ị na-anwa ịbanye na Pirate Bay. Fọdụ na-arụ ọrụ igbochi ọdịnaya ha chere na nwebisiinka. Ọ bụrụ na ị zutere ọnọdụ a, mgbe ahụ ọ ga - enye aka ịnwale otu saịtị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ: https://tpb.wiki/.
# 6. Mepụta njikọ aka kpọmkwem.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na-enweghị eriri mgbe ị na-abanye The Pirate Bay, mgbe ahụ ọsọ ọsọ gị ga-adị nwayọ. You ga - achọ ịgbanye eriri ozugbo na modem kama ọ bụrụ na ị nwere eriri toro ogologo iji nabata nhọrọ a. Gbalịa ịnweta enyo kachasị arụ ọrụ maka Pirate Bay na 2019 iji hụ ma enwere ebe mgbagha maka nsogbu ISP nwere ike ịbụ: Pirate Bay.
Enwere ike inwe nsogbu nnabata ndị ọzọ ị ga-atụle. Typesfọdụ ụdị igbe ozi telivishọn ochie nwere ike igbochi Internetntanetị gị, ọbụlagodi na ha anaghị enweta ego ọ bụla. Ogologo ma obu ogologo nke obere eriri gi nwekwara ike ibute nsogbu. Enwere ike ịnwe ndabatabịa na elektrọnik ọzọ gị.
Ozugbo ị dozie nsogbu ndị nwere ike igbochi ọsọ nbudata ọsọ gị, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ uru niile na-eweta Pirate Bay na-enye kwa ụbọchị.